XOG: QM iyo DF Soomaaliya oo kulan xasaasi ah ka yeeshay arrimaha Siyaasadda.
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa kula kulmay Muqdisho Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya (SRSG) ahna Madaxa Howlgalka Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), James Swan.
Kulanka labada dhinac ayaa looga wada hadlay iskaashiga u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Qaramada Midoobey si loogu adeego Soomaalida, waxa kale oo ay isla fallanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda iyo nabadgelyada dalka.
Wararka ayaa sheegaya in ay dhinacyadu soo qaadeen talaabooyinka kuwajahan dawlad gobaleedyada, gaar ahaana xaaladda Jubbalans oo ay Horey u diideen dhinacyadu wax kasta oo kasoo baxa doorashooyin aan loo dhameyn wixii aan aheyn.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa uu markale ku celiyay taageerrada dalkiisu u haayo dadaallada Wakiilka Gaarka ah iyo qorshaha howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal badan galinaysa in arrimaha dawlad gobaleedyada ay inta vadan gacanta kuhayaan, gaar ahaana qadiyadda Jubbaland oo ay kasoo horjeedaan in ay kabaxdo gacanta dawladda.
Sidaas oo kale warar ayaa sheegaya in laga wada hadlay arrimaha wasiir katirsanaa Jubbaland oo 31kii August lagu qabtay madaarka Muqdisho, kaas oo ay hayaan laamaha ammaanka.